लेनिन कथा – १९ अक्टोबर क्रान्तिको उत्कर्ष - Online Majdoor
मरिया प्रिलेजायेभा १४ असार २०७७, आईतवार ०९:१०
प्रसिद्ध सोभियत लेखिका मरीया प्रिलेजायेभाको यो पुस्तकले बडो सरल, आत्मीयतापूर्ण र भावोत्तेजक शैलीमा लेखिएका स–साना कहानीहरूमार्फत क्रान्तिकारी नेता र व्यक्तिको रूपमा लेनिनको सर्वाङ्गीण र जीवन्त चित्र प्रस्तुत गर्दछ ।
अघिल्लो अङ्कमा हामीहरूले लेनिन स्वदेश फर्किदा रुसी जनतामा देखिएको उत्साह साथै आमाको सम्झनामा उनको भावुक भावको बारेमा सविस्तार पढ्यौँ ।)
सेर्दोभोल्स्काया सडकदेखि स्मोल्नी करिब दस किलोमिटर टाढा थियो । ट्राम कतै देखिएको थिएन । मानिसहरू आ–आफ्ना घरमा लुकिबसेका थिए । चुक घोप्टाएजस्तो अँध्यारो रात थियो । एउटा हातले अर्को हात नभेटाउने अन्धकार थियो । पाइला बेला–बेला हिलोमा पर्थे । बतासले बेला–बेला अनुहारमा थप्पडाउँथ्यो ।
भ्लादीमिर इल्यीच छाती तन्काउँदै र टाउको निहुराउँदै बतास आएतिर लम्किरहेका थिए ।
“रोक्नुस्, रोक्नुस् !” एइनो राहियो जोड–जोडले चिच्याए । अघिल्तिरबाट ट्राम आइरहेको थियो । नजिकै त्यसको बिसौनी थियो । ट्राम रोकियो, उनीहरू दौडेर त्यसमा चढे । त्यो लगभग खाली थियो र डिपोमा फर्किरहेको थियो । ठीकै भयो, कम्तीमा आधा बाटो हिँड्नु त परेन ।
लेनिनले अँध्यारोमा शरदको निरस रात नियालिरहेका थिए । सशस्त्र सिपाहीहरूले भरिएको एउटा ट्रक नजिकै आयो र ट्रामलाई उछिन्यो । दोस्रो ट्रक पनि आयो । र त्यही प्रक्रिया दोहोरियो । “आज पुँजीपतिहरूलाई धुलो चटाइनेछ,” कसैले भन्यो ।
“ट्राम डिपो जाँदै छ, सबै ओर्लिनुस्,” खलाँसीको आवाज सुनियो । लेनिन र राहिया फेरि सुनसान र अँध्यारो सडकमा हिँडे । युन्कर (सैनिक विद्यालयमा प्रारम्भिक तालिम लिएका जारका सेना) हरू बाटामा भेटिने डर थियो ।
त्यसै बेला इँटा बिछ्याइएको बाटोमा घोडाको टकटक सुनियो । अघिल्तिरबाट दुईजना युन्कर घोडा चढेर आइरहेका थिए । एउटाले जोडले लगाम तान्यो । घोडा हिन्हिनाउँदै पछिल्ला खुट्टाले उभियो ।
“तेरो अनुमतिपत्र खै !” युन्करले राहियासँग सोध्यो ।
राहियाको बुढो साथीमाथि युन्करहरूले कुनै चासो दिएनन् । बुढाबाट केको खतरा ? पट्टी बाँधिएको गाला हातले छोपेर बुढा मान्छे छोटा पाइला चाल्दै अगाडि बढे ।
“कस्तो अनुमतिपत्र ?” नबुझेजस्तो बहाना बनाउँदै राहियाले सोधे । यताउताका कुरा गर्दै उनी लेनिनलाई बाटो काट्ने समय दिन चाहन्थे ।
“अनुमतिपत्र कहाँ पाइन्छ मलाई के थाहा ? किन चाहियो र ? त्यसै पनि हेर्नुस् म नाथे मजदुर न हुँ ।” एक युन्करले गाली गर्दै कोर्रा उठायो । “साला, बहाना बनाउँछस् ?” “छोड्दे भो,” अर्कोले उसलाई रोक्यो । दुवै घोडाचढी आफ्नो बाटो लागे । राहिया पनि लेनिन गएतिर दौडिए । “धन्यवाद,” राहियाले भेटाइसकेपछि लेनिनले भने ।
स्मोल्नीअगाडिको विशाल मैदान । यसको माझैमा एउटा सडक थियो । त्यहाँ कताकति रूख र झाडीहरू उम्रिएका थिए । मैदान मानिसको घुइँचोले कोलाहलमय थियो । ठाउँ–ठाउँमा आगो दन्किरहेको थियो, लप्का उठिरहेका थिए । सिपाहीहरू वरिपरि उभिएर आगो तापिरहेका थिए । पालैपालो ट्रकहरू स्मोल्नी पुगिरहेका थिए । ती ट्रकबाट हतियारधारी नाविक र मजदुरहरू ओर्लिरहेका थिए, स्मोल्नीमा जम्मा भइरहेका थिए ।
मैदानमा सैनिकहरूलाई पङ्क्तिबद्ध हुने आदेश दिइयो । जताततै भीड र कोलाहल थियो । स्मोल्नीनजिकै तोपहरू राखिएका थिए । प्रवेशद्वारमा पहरेदारहरू उभिएका थिए । स्मोल्नीको लामो भवनका तीनै तलाका झ्यालहरू उज्यालोले झकिझकाउ थिए । तेज प्रकाशले जग्मागाइरहेको स्मोल्नी र उत्तेजनाले धपधपाउँदा आँखा भएका मानिसहरूको यो दृश्य निकै शानदार थियो ।
लेनिनको मुटुको ढुकढुकी बढिरहेको थियो । आखिर त्यो दिन, त्यो पल पनि आयो । यसैको लागि उनले आजसम्म सङ्घर्ष गरेका थिए ।
लेनिन र राहियालाई स्मोल्नीमा पस्न दिइयो । लेनिनको ओभरकोटका टाँक खुल्लै थिए । हात खल्तीमा थिए । र, नक्कली कपाल उनले भुलिसकेका थिए । लामा पाइला चाल्दै गर्दा उनले मानिस र हातहतियारका बाक्साले भरिभराउ गल्लीहरू पार गरे । उनी सिधै तेस्रो तलामा रहेको सैनिक क्रान्तिकारी समितिको कोठातर्फ लम्किए ।
समितिका सबै सदस्य त्यहाँ उपस्थित थिए । पछिल्लो बार्‍ह घन्टादेखि त्यहाँ बैठक चलिरहेको थियो । क्रान्तिलाई कार्यरूप दिने सवालमा छलफल भइरहेको थियो ।
बीच–बीचमा बारम्बार लालगार्ड, सैनिक दलहरू र कलकारखानाका सन्देशवाहकहरू आइरहन्थे ।
लेनिन कोठामा प्रवेश गरे । उनले टोपी खोले, सँगै नक्कली कपाल पनि झिके । यसको अब कुनै आवश्यकता थिएन ।
सैनिक क्रान्तिकारी समितिका दुब्लापातला अध्यक्ष निकोलाइ इल्यीच पोद्भोइस्की लेनिनतर्फ लम्किए । अनिँदोले गर्दा उनका आँखा सुन्निएका थिए ।
“भ्लादीमिर इल्यीच !” लेनिनको आगमनले उनी निकै हर्षित थिए । लेनिनसँगै जोश र जाँगर पनि जुर्मुराएझैँ देखिन्थ्यो । पोद्भोइस्की लेनिनले के भन्लान् भनी अधीर भई पर्खिरहेका थिए ।
“ढिलो गर्नु भनेको काललाई निम्त्याउनु हो !” लेनिनले छिटो–छिटो तर दृढतापूर्वक भने । “हामीले तारघर, टेलिफोन एक्सचेन्ज, रेल स्टेशन र पुलपुलेसामाथि कब्जा गर्नु छ । अहिल्यै, यही रात ।”
सैनिक क्रान्तिकारी समितिका मुख्यालय क्रान्तिको मुख्यालय थियो । भर्खरै लेनिन आएको यस स्थानमा सन्देशवाहकहरू दौडिँदै आए । “लेनिन आउनुभएको छ !” स्मोल्नीभरि बिजुलीजस्तै यो खबर फैलियो । सन्देशवाहकहरूलाई आदेश दिइयो । सैनिक क्रान्तिकारी समितिको आदेश थियो – तारघर, टेलिफोन एक्सचेन्ज, रेल स्टेशन, पुलपुलेसा र सबै सरकारी कार्यालयहरू कब्जा गरियोस् ।
“लालगार्ड, सावधान !” स्मोल्नीअगाडिको मैदान गुञ्जियो । आगो दन्किरहेको थियो । सशस्त्र मजदुरहरूले भरिएका ट्रकहरू अक्टोबरको रातमा हुत्तिँदै हराइरहेका थिए । सिपाही र नाविक दल पनि सैनिक क्रान्तिकारी समितिको आदेश पूरा गर्न निस्किरहेका थिए ।
२४ अक्टोबर । ग्रिगोरी क्यालेन्डरअनुसार ०७ नोभेम्बर । रातमा सशस्त्र मजदुरहरू र क्रान्तिकारी सैनिक दलहरूले रूसको राजधानी पेत्रोग्रादलाई आफ्नो कब्जामा लिए ।
(त्यस दिनको) महान् अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न भयो ।
शीतल दरबारमाथि कब्जा
अस्थायी सरकारले आफ्ना हित्तचित्त मिल्नेहरूसँगै शीतल दरबारमा डेरा जमाई बसेको थियो । शीतल दरबारको अग्रभाग नेभा नदीतर्फ फर्केको थियो र पछिल्लो भाग विशाल दरबार चोकतर्फ । शीतल दरबार सेता खम्बाहरू र मूर्तिहरूले सजिएको थियो । ढोकाका चौकस र पल्लाहरूमा ठुलठुला मूर्ति र कलश कुँदिएका थिए । शिखरमा पखेटा फैलाएको एकदम ठुलो र सुनौलो चील बनाइएको थियो । पहिले यस दरबारमा जारहरू बस्थे ।
लेनिनले सैनिक क्रान्तिकारी समितिका अध्यक्ष पोद्भोइस्कीसँग भने : “पेत्रोग्राद हाम्रो अधिकारमा छ । तर, शीतल दरबारमाथि अझै कब्जा हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि यथाशीघ्र कब्जा गरी अस्थायी सरकारलाई गिरफ्तार गर्नु छ ।”
२५ अक्टोबर । अक्टोबर क्रान्तिको पहिलो बिहानी । रूसी नागरिकहरूले लेनिनको अपिल पढे, “रूसी जनताको नाममा !” त्यसमा लेनिनले लेखेका थिए, ‘अस्थायी सरकारलाई अपदस्थ गरी सोभियतहरूले सत्ता आफ्नो हातमा लिएका छन् । क्रान्ति विजयी भएको छ ।’
वास्तवमा भएको यस्तै थियो । अस्थायी सरकारको हातमा सत्ता थिएन । तर, त्यसका मन्त्रीहरूले आफैलाई शीतल दरबारमा बन्दी बनाएका थिए ।
“यो कुरा साँचो हो ?” लेनिनले कडा शैलीमा पोदभोइस्कीसँग सोधे । “नआत्तिनुस्, शीतल दरबार आज हाम्रो हुनेछ,” सैनिक क्रान्तिकारी समितिका अध्यक्षले जवाफ दिए । लालगार्ड दलहरू र क्रान्तिकारी दस्ताहरूलाई शीतल दरबार घेर्न आदेश दिइयो । मजदुरहरू र सैनिकहरूले शीतल दरबार आसपासका सडक र नाकाहरूमा अधिकार जमाए ।
शीतल दरबारलाई चारैतिरबाट घेरियो । मुख्य–मुख्य ठाउँहरूमा तोप लगाइयो । डु·ाहरूले बिस्तारै नेभामा प्रवेश गरी शीतल दरबारअगाडि ल·र हाले । नेभामा राखिएको युद्धपोत ‘एब्रोरा’ का तोपहरू पनि शीतल दरबारतर्फ सोझ्याइयो । नाकाबन्दी पूरा भयो । यो २५ अक्टुबर १९१७ को रातको घटना हो । ग्रिगोरी क्यालेन्डरमा ७ नोभेम्बरको रात ।
मानिसहरूले १९०५ को ‘आइतबारे हत्याकाण्ड’ झलझली सम्झेका थिए । त्यसदिन यही दरबारअगाडिको विशाल र भव्य प्रा·णमा पिटर्सवर्गका कलकारखानाका हजारौँ मजदुरहरू शान्तिपूर्ण रूपमा एउटा हातमा देवताका मूर्ति लिएर एकत्रित भएका थिए । उनीहरू ‘पितातुल्य’ जारसँग सहायताको प्रार्थना गर्न, रोटीको भिख माग्न आएका थिए । तर, बदलामा उनीहरूले गोलीको वर्षा सामना गर्नुपरेको थियो । त्यस आइतबार शीतल दरबारअगाडि हजारौँ निहत्था र निरीह मजदुरहरूको रगत बगेको थियो । त्यसैले यो पटक, १९१७ को अक्टोबरमा मजदुरहरू यहाँ देवताका मूर्तिहरू लिएर आएका थिएनन् । शीतल दरबार, अब हेर् हाम्रो तागत ! कमिसार र सैनिक क्रान्तिकारी समितिका सदस्यहरूले कार र घोडाहरूमा बसेर मोर्चाहरूको निरीक्षण गरिरहेका थिए ।
“कामरेड, धैर्य गर्नुस् ! अलिकति तागत अझै बढाउनुस् । कामरेड लेनिनले क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ ।”
“लेनिन !” मजदुर र सैनिकहरूको मोर्चाबन्दी गुञ्जियो ।
शीतल दरबारको घेराउको काममा के कति प्रगति भइरहेको छ भनी स्मोल्नीमा लेनिनलाई लगातार रिपोर्ट पुगिरहेको थियो । उनी कलम हातमा लिएर नक्सामाथि झुकेका थिए । यी ठाउँहरूमा फलाना–फलाना दल तैनाथ छन्, फलानो दल यहाँ छ… यहाँ जवानहरूको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ । क्रोनश्ताइतबाट नाविक आए । युद्धपोत ‘एब्रोरा’ तयार छ… ।
“कामरेडहरू, बेला यही हो । हमला सुरु गर्नुस्,” लेनिनले आदेश दिए ।
साँझ चिसो थियो । हावा चलिरहेको थियो । घरका ढोकाहरू बन्द भइसकेका थिए । प्रकाशरहित झ्यालहरू अपरिचितजस्ता देखिन्थे । सडकमा ठाउँ–ठाउँमा आगो दन्किरहेको थियो । हावामा कडा धुवाँ मिसिएको थियो । शीतल दरबारवरिपरिको घेरा कसिँदै थियो ।
उता दरबारभित्र पनि मानिसहरू हात बाँधेर बसिरहेका थिएनन् । उनीहरूले पनि लडाइँको तयारी गरिरहेका थिए । युन्कर र अफिसरहरूले दाउराका तगारा ठड्याएर दरबार पस्ने सबै बाटा बन्द गरेका थिए । तगाराहरूको बीचमा मेसिन गन तैनाथ थिए । शीतल दरबारको वरपर अप्रत्याशित नीरवता छाइरहेको थियो । स्मोल्नीबाट सैनिक क्रान्तिकारी समितिलाई पुनः लेनिनको सन्देश आयो । “अबेला गर्नु ठीक हुँदैन । शीतल दरबारमाथि तुरुन्त हमला सुरु गर्नुस् ।”
रातको सुनसान अँध्यारो थियो । एकाएक नेभामाथिको आकाश तोपहरूको गर्जनले गुञ्जायमान भयो । हावा थर्कियो ।
‘एब्रोरा’ तोपहरूले हमला सुरु भएको सड्ढेत मात्र दिएका थिए । समुद्रका विकराल छालहरू जस्तै लालगार्ड र सैनिकहरू शीतल दरबारतर्फ लम्के । नजिकैका सडकहरूबाट तोप र गोलीहरू वर्षिन थाले । मेसिन गनहरूबाट गोलीको वर्षा सुरु भयो । दरबारनजिक ठड्याइएका दाउराका तगारा पल्टाउँदै हतियारयुक्त गाडी गड्किँदै दरबारको प्रा·णतर्फ गयो । हतियार फालेर युन्करहरू दरबारभित्र पसे ।
“वाह ! मजदुर क्रान्ति जिन्दावाद !” युन्कर र अफिसरहरूलाई पछ्याइरहेका लालगार्ड र सैनिकहरू चिच्याए ।
लाल सेनाका दलहरू दरबारभित्र दाखिल भए । पहिलोपटक दरबारको भित्री बनावट देखेर सबैका आँखा तिर्मिराएका थिए । सयौँ कोठाहरू र हल, झल्लर, मखमल, रेशम, तस्वीरहरू, मूर्तिहरू, महँगा फर्निचर, ठुलठुला ऐना… । कुनै लालगार्डले हतियारले सुनौलो फ्रेममा राखिएको दर्पण फुटाल्यो । झन्झनाउँदै काँचका टुक्राहरू जमिनमा छितरिए ।
“पागल भयौ कि क्या हो ?” साथीहरूले उसलाई हप्काए ।
“आजदेखि यो जारको होइन, हाम्रो हो । जनताको सम्पत्ति हो ।” बन्दुकहरू सोझ्याउँदै लालगार्ड र सैनिकहरू अगाडि बढ्दै गए । तिनीहरूको नेतृत्व अन्तोनोभ ओभ्सेयन्को, एरेमेयभ, पोद्भोइस्की आदिले गरिरहेका थिए । निला पोशाक लगाएका दरबारका नोकरहरू डरले अताल्लिएका थिए । अस्थायी सरकारका सबै मन्त्रीहरूले आफूलाई एउटा हलमा बन्द गरेका थिए । युन्करहरूले त्यस हललाई सुरक्षा दिइरहेका थिए ।
“युन्करहरू, अफिसरहरू, हतियार फ्याँक ! मन्त्रीज्यूहरू, तपाईँहरू गिरफ्तार हुनुभएको छ !”
रात छिप्पिसकेको थियो । तर, स्मोल्नीका सबै झ्यालहरू तेज प्रकाशले जगमगाइरहेका थिए । सिँढी, गल्ली र कोठाहरूमा मानिसहरूको घुइँचो लागेको थियो । सबैजना निकै उत्तेजित थिए र व्याकुल भई शीतल दरबारको समाचार पर्खिरहेका थिए । जोड–जोडले बुट बजाउँदै सैनिक क्रान्तिकारी समितिका अध्यक्ष पोद्भोइस्की कोठामा प्रवेश गरे । अक्टोबर महिनाको चिसो र बतासले उनको मुहार कटकटिएजस्तो देखिन्थ्यो । “कामरेड लेनिन ! शीतल दरबार कब्जा गरिएको छ,” सैनिकी पारामा सलाम ठोक्दै उनले भने । लेनिन जुरुक्क उठे र पोद्भोइस्कीलाई च्याप्प समातेर अङ्गालो हाले ।